Vaovao - Sivana rano tokana izay mampihena ny loto isan-karazany
Sivana rano tokana izay mampihena ny loto isan-karazany
Ao anatin'ny hetsika herinandron'ny rano eran-tany 2021, ny Stockholm Youth Water Award dia mikarakara fifaninanana iraisampirenena izay anoloran'ny mpianatra 15 ka hatramin'ny 20 taona vahaolana ho an'ireo fanamby lehibe amin'ny rano. Ilay nandresy, Eshani Jha dia nandinika ny fomba fanesorana ireo loto isan-karazany amin'ny rano amin'ny alàlan'ny fitaovana tokana, izay tena zava-bita azontsika, mpamatsy sivana rano avy any Shina, tamin'ny alàlan'ny sivana maro sosona, fitehirizana habakabaka ary vidiny lafo.
(Source loharano: SIWI.org)
Araka ny voalazan'ny ohabolana taloha, "an'arivony no velona tsy manam-pitiavana, tsy misy tsy misy rano", ny rano no sarobidy amintsika, kanefa ny olan'ny fahalotoan'ny rano miantraika amin'ny tontolo iainantsika sy ny fahasalamantsika. Ny fahalotoan'ny rano dia olana mitombo manerantany, ny loto toy ny akora simika, bakteria ary metaly mavesatra dia entina avy any ivelany ka hatrany amin'ny fantson-drano fisotrointsika. Noho io antony io dia nanjary olana manerantany ny fitsaboana rano amin'ny paompy. Ilay mpandresy voafantina tamin'ireo mpianatra nandray anjara tamin'ny fifaninanana dia nanao fikarohana momba ny fomba hampihenana ny loto isan-karazany amin'ny rano manta amin'ny fomba tsotra sy ara-toekarena. Tafiditra ao anatin'izany ny fanoloana ny karbaona ampandehanana amin'ny Biochar mba hampiasaina amin'ny sivana rano lafo vidy. Ny ampahany miavaka amin'ity vahaolana ity dia miankina amin'ny mety hanesorana ireo loto maro amina fitaovana iray. Mifanindran-dàlana, ny Filter Tech dia afaka manome vahaolana mitovy amin'izany amin'ny fampifangaroana ireo mediana sivana isan-karazany amin'ny fihenan'ny loto hafa amin'ny rafitra sivana rano tokana. Amin'ny alàlan'ny fikarohana sivana roa na telo amin'ny rano amin'ny "vokatra - Filtration an-dakozia sy fandroana”Ao amin'ny tranokalanay, azonao atao ny mitazona loto mandoto maro alohan'ny fisotroana.
Ny hetsika dia nalamina isan-taona hatramin'ny 1997 avy amin'ny SIWI. Miaraka amin'ireo tranga COVID-19 manerantany, dia natao an-tserasera ny hetsika tamin'ity taona ity. Mamporisika ny fahavononan'ny tanora hanokana ny tenany ho anisan'ny tontolo misy rano tsaratsara kokoa.
Mpanadio rano amin'ny trano iray manontolo, Fanoloana sivana amin'ny cartridge amin'ny rano, Rafitra Osmosis Reverse tsara indrindra, Sarina cartridges, Fanadiovan-drano ho an'ny rano mafy, Paompy Rafitra fanivanana rano,